Igwe anaghị agba nchara efere Manufacturers - China igwe anaghị agba nchara efere Factory, Suppliers
304 lechara nickel mpempe akwụkwọ metal gold gold nickel mpempe akwụkwọ metal vibration imecha 304l igwe anaghị agba nchara efere
Gịnị bụ 304 agba leghaara igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ?
304 igwe anaghị agba nchara efere eserese waya bụ ihe yiri waya waya n’elu igwe anaghị ata nchara.
Nke a bụ naanị teknụzụ nhazi nke igwe anaghị agba. Elu bụ matt, ọ dịkwa ntakịrị ihe ederede na ya nke ọma, mana enweghị ike ịnụ ya.
Ọ na-eguzogide ọgwụ na-adịgide adịgide karịa ndị nkịtị igwe anaghị agba nchara ma na-ele anya dị elu.
Mara mma elu na iche iche iji ohere; ezigbo nguzogide corrosion, ogologo oge na-adịgide karịa ọla nchara nkịtị, nguzogide corrosion ka mma; ike dị elu, ya mere enwere ike iji efere ndị dị mkpa; Ọdịdị dị elu dị elu na ike dị elu, n'ihi ya, ọ nwere ike iguzogide ọkụ; nkịtị okpomọkụ nhazi, Nke ahụ bụ, mfe plastic nhazi. N'ihi na ọ dịghị mkpa maka ọgwụgwọ elu, ọ dị mfe ma dị mfe ilekọta; ọcha, elu imecha; arụmọrụ dị mma
321 Igwe anaghị agba nchara efere akpọrepu
Nkọwa banyere 321 / 321H igwe anaghị agba nchara
Ọ na-enwe nguzogide dị mma na corrosion intergranular na okpomọkụ ruo 800-1500 ° F (427-816 Celsius C) na ọdịda mmiri carbide chromium. N'ihi mgbakwunye nke titanium na ngwakọta, 321 Hot akpọrepu Igwe anaghị agba nchara efere ka nwere ike ịnọgide na-enwe nkwụsi ike n'ihe banyere kromium carbide e guzobere.
321 Hot akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere nwere uru na elu okpomọkụ gburugburu ebe obibi ruru ya magburu onwe n'ibu Njirimara. Tụnyere 304 alloy, 321 alloy igwe anaghị agba nchara nwere mma ductility na iguzogide nchegbu mgbaji ọkpụkpụ. Na mgbakwunye, enwere ike iji 304L mee ihe maka mgbochi-sensitization na intergranular corrosion.
Alloy 321 (UNS S32100) bu ezigbo igwe nchara. Ọ na-enwe nguzogide dị mma na corrosion intergranular na okpomọkụ ruo 800-1500 ° F (427-816 Celsius C) na ọdịda mmiri carbide chromium. N'ihi mgbakwunye nke titanium na ngwakọta, 321 Hot akpọrepu Igwe anaghị agba nchara efere ka nwere ike ịnọgide na-enwe nkwụsi ike n'ihe banyere kromium carbide e guzobere. Alloy 347 bụ n'ihi mgbakwunye nke niobium na tantalum iji kwado nkwụsi ike ya. .
A na-ejikarị alloy 321 na 347 arụ ọrụ ogologo oge na 800-1500 ° F (427-816 ° C) na gburugburu ebe dị elu. Ọ bụrụ na ngwa ahụ gụnyere naanị ịgbado ọkụ ma ọ bụ kpo oku oge dị mkpirikpi, jiri 304L dochie ya.
Igwe ọrụ arụmọrụ dị elu nke 321 na 347 alloys na-adaberekwa na njirimara ha dị mma. E jiri ya tụnyere 304, 304L, 321 na 347 nwere nrụgide dị nro na nrụgide mgbape. Nke a na-enye ohere nrụgide nke alloys ndị a iji zute ụkpụrụ nchịkwa mmiri nke American Society of Mechanical Engineering na nkọwa ụgbọ mmiri na ọnọdụ dị elu. Ya mere, ọrụ kachasị dị na 321 na 347 alloys bụ 1500 ° F (816 ° C), ebe 304, 304L bụ 800 Celsius (426 ° C).
321 na Alloy 347 nwekwara ọdịnaya carbon dị elu, nọmba UNS ha bụ: S32109 na S34709.
409 409L Hot Rolled igwe anaghị agba nchara efere
Pallet arọ: 1.0MT - 3.0MT
410 410s Hot akpọrepu Igwe anaghị agba nchara efere
Kedu ihe dị iche na 409 na 410 igwe anaghị agba:
409 - ewezuga mgbakwunye titanium, ihe nlereanya dị ọnụ ala, nke a na-ejikarị dị ka ọkpọkọ ụgbọ na-ekpochapu ọkụ, bụ igwe anaghị agba nchara (chrome steel), nke kwesịrị ekwesị maka ịgbado ọkụ, ụgwọ dị ala, uzuoku na-ekupụ ọkụ ọkụ na ụzo ọkụ.
410 - Martensite (akwa-chrome steel), ezigbo nkwụsi ike na adịghị ike mmebi ahụ, kwesịrị ekwesị maka mgbapụta. Ngwakọta kemịkal ya nwere 13% chromium, 0.15% ma ọ bụ obere carbon na obere obere alloys ndị ọzọ. Akụrụngwa dị ọnụ ala, magnetik, ma sie ike site na ọgwụgwọ okpomọkụ. General ojiji gụnyere biarin, ọgwụ ahụ ike ngwa ọrụ na ngwaọrụ na ngwa oru ogwe, na tensile akụkụ.
410 430 430F 430LX igwe anaghị agba nchara
410 igwe anaghị agba nchara dakọtara na China 1Cr13 igwe anaghị agba nchara S41000 (American AISI, ASTM). 0.01% carbon, 0.13% chromium 0.1 410 igwe anaghị agba nchara: ezigbo corrosion eguzogide, machinability, n'ozuzu nzube pupụtara, valves.
Okpomọkụ omume nke 410 igwe anaghị agba nchara: ọgwụgwọ ngwọta (Celsius C) 800-9000 nwayọ nwayọ ma ọ bụ 750 ngwa ngwa jụrụ oyi
430 igwe anaghị agba nchara nwere ezigbo corrosion eguzogide na izugbe ígwè ọkwa, thermal conductivity dị mma karịa austenite, thermal mgbasa ọnụọgụ dị obere karịa austenite, okpomọkụ ike ọgwụgwụ, na-agbakwunye stabilizing mmewere titanium, na n'ibu Njirimara nke Weld saịtị dị mma. Maka iwuli elu ụlọ, akụkụ mmanụ burner, ngwa ụlọ, akụrụngwa akụrụngwa.
430F bụ ọkwa nke ígwè nwere ihe na-egbutu ihe na 430 ígwè. Ejiri ya na akpaghị aka, bolts na akụ.
430LX na-agbakwunye Ti ma ọ bụ Nb na 430 ígwè, na-agbada ọdịnaya C, ma na-emezi ihe nhazi na weldability. Ejiri ya na tankị mmiri ọkụ, sistemụ mmiri ọkụ, ngwa ngwa, ngwa ngwa ụlọ, ịnyịnya ígwè, wdg.
430 Hot akpọrepu Igwe anaghị agba nchara efere
Tụnyere nke 304 igwe anaghị agba nchara na 430 igwe anaghị agba nchara:
1. Corrosion eguzogide: 430 igwe anaghị agba nchara nwere 16.00-18.00% chromium, nke nwere isi na nickel metal. 304 igwe anaghị agba nchara nwere ihe chromium na nickel metal, ya mere 430 igwe anaghị agba nchara na-eguzogide ọgwụ dị mma karịa 304 igwe anaghị agba nchara.
2. kwụsie ike: 430 igwe anaghị agba nchara bụ ferrite, 304 igwe anaghị agba nchara bụ austenitic, 304 igwe anaghị agba nchara bụ ihe siri ike karịa 430 igwe anaghị agba nchara,
3.toughness: igwe anaghị agba nchara 304 nwere ike siri ike, dị ike karịa 430 igwe anaghị agba nchara
4.thermal omume: 430 igwe anaghị agba nchara ferrite dị mma karịa 304 igwe anaghị agba nchara austenitic okpomọkụ mbufe arụmọrụ,
5.mechanical Njirimara: 430 igwe anaghị agba nchara gbakwunyere ngwongwo kemịkal nke titanium, ihe ndị na-arụ ọrụ nke ebe ntanetị dị mma karịa igwe anaghị agba nchara 304.
2507 Igwe anaghị agba nchara efere akpọrepu
Gịnị bụ 2507 Hot akpọrepu igwe anaghị agba nchara efere
2507 bụ igwe anaghị agba nchara bụ ferritic-austenitic (duplex). Ọ na-agwakọta ọtụtụ ihe bara uru nke ferritic steel na austenitic steel. Ebe ọ bụ na nchara nwere nnukwu chromium na molybdenum, ọ nwere oke nguzogide ọma nke olulu, nsị na-emebi emebi na mmebi edo. Microstructure nke okpukpu abụọ na-eme ka o doo anya na nchara nwere nnukwu iguzogide nrụgide nrụrụ nrụgide, na ike igwe dịkwa elu.
Igwe anaghị agba nchara Checker efere
Kedu ihe ọ bụ igwe anaghị agba nchara checker plate
Igwe anaghị agba nchara Checker efere: Mpempe akwụkwọ Checker na-eji ike igwe dị ka ihe ọkụkụ nke ụdị na nha dị iche iche na elu igwe anaghị agba nchara. 1.non-ileghara, ogologo were oge; 2.fire mgbochi na iru mmiri, mfe na-ehicha ọcha; 3.Septting plating usoro nwere ike mere na-enweghị mkpịsị aka.
Ehicha igwe anaghị agba nchara
Nhicha nke electrolytic: iji acidic electrolyte (acid siri ike), a ga-etinye ihe nlele a na-egbuke egbuke na post-ugbu a (ihe dị ka 7 mA), na anode na-agbaze. N'ihi oke nke ugbu a, akụkụ ndị na-apụta na-agbaze ngwa ngwa, na elu ahụ na-adị larịị, na-eru nsonaazụ Polish ikpeazụ (enwere ike ịhụ mmetụta ahụ n'ime ihe dịka 10 nkeji). Basickpụrụ nke electropolishing: otu ihe ahụ dị ka polishing kemịkalụ, ya bụ, site na nhọta na-agbari obere akụkụ convex nke elu nke ihe ahụ iji mee ka elu ahụ dị larịị. E jiri ya tụnyere polishing kemịkalụ, a pụrụ iwepụ nsonazụ cathode, nsonaazụ ya ka mma.
Mechanical polishing: N'ihi na ike ike elu nke igwe anaghị agba nchara efere iji nweta ji achọ mmetụta ga-abụ: na-agbazi eku na-egbu maramara na a belt polishing igwe, mbụ na 120 # abrasive belt, otutu elu agba onye oge, ịgbanwe 240 # abrasive belt, wụ ya elu Mgbe agba ahụ dị elu, gbanwee eriri 800 # abrasive ma tụba ya na agba elu otu oge. Mgbe ahụ gbanwee eriri 1200 # abrasive ma tụfuo mmetụta nke ịchọ mma efere igwe anaghị agba.
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị ugbu a dị ka 0.78mm. elu nke efere a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere ntụpọ dị ka igwe oxide na nkwụ. Mpempe akwụkwọ a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere obere ike, nhazi dị mfe na ezi ductility. Hot-akpọrepu ígwè Ibé akwụkwọ, n'ibu Njirimara ndị na-erughị ihe oyi nhazi, na abuo ibe ya bụrụ na nhazi, ma nwere mma ike na ductility.